ဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၂ – The Believer’s Bible Commentary – Myanmar
By ယုံကြည်သူသမ္မာကျမ်းအနက်ဖွင့်	Published April 29, 2017 ဓမ္မသစ်ကျမ်း, ဟေဗြဲသြဝါဒစာ
(ဂ)ခရစ်တော်၌မျှော်လင့်ခြင်းရှိရန်တိုက်တွန်းချက် (အခန်း ၁၂)
၁၂:၁ ဟေဗြဲသြဝါဒကျမ်းသည် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းခံရသူများသို့ ရည်ရွယ်ရေး သားထားခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးစွာနားလည်ရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ယုဒထုံးတမ်း စဉ်လာကို ကျောခိုင်းပြီးခရစ်တော်ထံသို့ ချဉ်းကပ်ကြသဖြင့် ခါးသီးသောအတွေ့အကြုံရင်ဆိုင်ကြရသည်။ ထိုခါး သီးသောခံစားချက်ကို ဘုရားရှင်၏စိတ်တော်နှင့် မထိတွေ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်ဟု အနက်ကောက် မှားလျှင်အန္တရာယ်ကြီးမားပါသည်။ သူရဲဘောကြောင်ပြီး လက်လွှတ်လိုက်နိုင်သည်။ အဆိုးရွားဆုံး မှာနောက်ပြန်လှည့်ပြီး ယုဒရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာအတိုင်း တရားဇရပ်သို့ခြေဦးတည့်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခံစားရသောစုံစမ်းခြင်းသည် ဝိသေသလက္ခဏာဖြစ်သည်ဟု မတွေးနိုင်ကြပါ။ အခန်း ၁၁ ပါ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းနည်းမျိုးစုံ ကြုံခဲ့ကြသည်။ သို့သော်လည်းသစ္စာသိသိ ဇွဲရှိရှိဖြင့်သီးခံခဲ့သည်။ အကယ်၍ထိုစုံစမ်းမှုအောက်တွင် ပိပြားကြေမွသွားခဲ့ကြလျှင် ယုံကြည်သူခရစ်ယာန်ကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာနိုင်စရာ အကြောင်းမရှိ။
ဤမျှလောက်များစွာသော သက်သေအပါင်းတို့သည် ငါတို့ကိုဝိုင်းရံလျက်ရှိကြသည်။ ထိုသို့ ဆိုခြင်းအားဖြင့် လောကကိုလှည့်ကြည်သည်ဟု မဆိုလိုပါ။ ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာနှင့် ဇွဲနဘဲတို့ကို နှောင်းလူများအတွက် သက်သေခံကောင်းများအဖြစ် ထားပေးခဲ့သည်။
ဤကျမ်းပိုဒ်နှင့်ပတ်သက်၍ မေးစရာမေးခွန်းရှိပါသည်။ “ကောင်းကင်နိုင်ငံရှိ သန့်ရှင်းသူ များသည်လောကသန့်ရှင်းသူများကို မြင်ရပါသလား သို့မဟုတ် မည်သည့်အငွေ့အသက်သက်ရောက် ပါသနည်း။ အပြစ်သားအားကယ်တင်ခြင်းရပြီးသော အခါမှသာလျှင်သေချာသော အဖြေရနိုင်သည်။ ရှင်လုကာတွင်ဤသို့ဆိုထားပါသည်။ “ဖြောင့်မတ်၍နောင်တရစရာ အကြောင်းမရှိသောသူ ကိုးဆယ် ကိုးယောက်တို့၌ ကောင်းကင်သားတို့သည်ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိသည်ထက် နောင်တရသောလူဆိုးတစ် ယောက်၌သာ၍ ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြသည်ဟု ငါဆို၏” (လု ၁၅:၇)။
ခရစ်ယာန်အသက်တာတွင် စည်းကမ်းကာလနားနှင့်ဇွဲနဘဲရှိရန် လိုအပ်သည်။ အရာခပ်သိမ်း နှင့်ရောယှက်ခြင်းမရှိအောင် ကာကွယ်ရမည်။ အလေးအပင်များသည် သူ့နေရာနှင့်သူ့ထားရှိလျှင် အကျိုးမပြုသော်လည်း အဟန့်အတားအနှောင့်အယှက်မပေးပါ။ ထိုအလေးအပင်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ထဲ တွင်ဥစ္စာပစ္စည်း၊ မိသားစုချည်နှောင်မှု၊ မေတ္တာကွန်ယက်နှောင်ဖွဲ့မှု၊ မလှုပ်ရှာမရုန်းကန်နိုင်မှုတို့ အစ ရှိသဖြင့်ရှိတတ်သည်။ အိုလံပစ်မာရသွန်ပြိုင်ပွဲတွင် အစားအသောက်များသယ်ဆောင်ခြင်း မကန့် သတ်ထားပါ။ သို့သော်ထိုဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးများ သယ်ဆောင်ခြင်းက ပန်းတိုင်တွင်ဆုရဖို့အဟန့်အတား ဖြစ်စေသည်မှာမလွဲဧကန်ပင်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လည်း လမ်းဘေးကပ်သွားလျှင် စာတန်ကလွယ်လင့် တကူခြေကန့်လန့်ထိုး လှဲချနိုင်သည်။ ဆိုလိုသည်မှာ အပြစ်ဒုစရိုက်သည် အရောင်အဆင်းပုံသဏ္ဍာန် မရှိသဖြင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးဖြင့် ပေါ်လာနိုင်သည်။ အဓိကမှာမယုံကြည်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ဘုရား သခင်၏ကတိတော်တွင် ခြေစုံပြည်ရပ်တည်ရမည်။ ယုံကြည်ခြင်းအသက်တာခိုင်မာရမည်။ သို့မှသာ လျှင်ပန်းတုံးတိုင်သို့ ပန်းဝင်နိုင်မည်။
ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် တာတိုခရီးမဟုတ်။ မာရသွန်ခရီးရှည်ဖြစ်သည်။ စုံစမ်းနှောင့် ယှက်ခြင်းဟူသမျှကို ကြံ့ကြံ့ခံတွန်းလှန်နိုင်ရမည်။ ခရစ်ယာန်အသက်တာသည် ဆူးကြားမှနှင်းဆီ ပန်းဖြစ်သည်။
၁၂:၂ မာရသွန်ပြေးလမ်းတလျှောက်တွင် ဘေးဘယ်ညာအခြားအရာများကို ဂရုမ စိုက်ဘဲ၊ ယေရှုကိုသာပန်းတိုင်အဖြစ် ရည်မှန်းချက်ထားရမည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ A.B. Bruce ကဤသို့ထောက်ခံထားသည်။
အရာခပ်သိမ်းထက်ထားရှိမည့် မင်္ဂလာတရားကားအသက်ရှင်သော ယုံကြည်ခြင်း ကိုချမှတ် ပေးသော ပထမဦးဆုံးစုံလင်သူသို့သာလျှင် ဖြစ်ရသည်။ ထိုသူသည် လက်ဝါး ကပ်တိုင် ပေါ်တွင် ခါးသီးရက်စက် သောဝေဒနာနှင့်မိုက်မဲစွာ စော်ကားခံရသူဖြစ်သည်။ ထိုဝေဒနာနှင့် အရှက်သိက္ခာများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော်ရွှင်ခြင်း နှင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ခံစားရစေရာ ဖြစ်သည်။
ကိုယ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းအားဇာတ်ညွန်းဇာတ်ပြုနှင့် ဦးဆောင်လမ်းပြသူ ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့ သစ္စာရှိရှိယုံကြည်ရမည့် အကြောင်းကိုရှေ့ဆောင်လမ်းပြခဲ့သည်။
ထို့အပြင် ကျွန်ုပ်တို့၏ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်း နိဂုံးချုပ်ပေးသည်။ မာရသွန်အစပြုရန် ခရာ မှုတ်ပေးသူသာမဟုတ်ပါ။ ပန်းတိုင်တွင်ဝမ်းသာအားရ ကြိုဆိုသူလည်းဖြစ်သည်။ ကိုယ်တော်သည် ကောင်းကင်မှဗက်လင်သို့ ဂေသရှေမန်မှ ကရာနီသို့သင်္ချိုင်းဂူမှကောင်းကင်နိုင်ငံသို့ ပန်းဝင်ခဲ့သည်။ ချော်လဲခြင်းမရှိနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းမပြုခဲ့ပါ။ သူ၏အသိအာရုံထဲတွင် သူကယ်တင်သူများနှင့် တကွ ထာဝရပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မည့်အကြောင်းသာ စွဲလန်းသည်။ ထိုအတွေးကအရှက်ရခြင်း၊ ဝေဒနာခံစား ခြင်းနှင့်သေခြင်းတို့ကို လွှမ်းမိုးသွားသည်။ ယနေ့ကာလတွင် ထိုသခင်ဘုရားသခင်သည် လက်ျာ ဘက်ပလ္လင်တော်တွင် စိုးစံလျက်ရှိသည်။
၁၂:၃ ထိုအပြေးသမားရုပ်ပုံကားချပ်သည် ယခုတစ်ခါအပြစ်ကိုတိုက်ခိုက်သော တိုက် ပွဲကားချပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲသွားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့စစ်သူကြီးသည် သခင်ယေရှုဖြစ်သည်။ အပြစ်ရှိ သောသူတို့လက်တွင် ထိုမျှလောက်ကြီးစွာသော သူမရှိ။ လူများကသောကဗျာပါဒထူပြောလျက် ကြောက်လန့်စိုးရိမ်နေကြသော်လည်း ကိုယ်တော်ဘုရားကပွဲချင်းပြီးအလဲထိုးအနိုင်ယူသည်မှာ သေ ချာပါသည်။
၁၂:၄ ကျွန်ုပ်တို့သည် အပြစ်ဒုစရိုက်ကိုမရပ်မနား ရင်ဆိုင်တော်လှန်သူများ ဖြစ် သည်။ အသွေးတော်ဖြင့်တွန်းလှန် တိုက်ခိုက်ခြင်းမရှိလျှင် မရဏသေမင်းနှင့် နှစ်ပါးသွားဖွယ်ရာ သာရှိသည်။ သို့သော်ကိုယ်တော်ဘုရားကအသွေးတော်ဖြင့် စင်ကြယ်စေခဲ့ပြီ။
၁၂:၅ ဤကျမ်းပိုဒ်တွင် စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ခရစ်ယာန်အမြင်ဖြင့် ဖော်ပြထား သည်။ စုံစမ်းခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း။ သွေးဆောင်ခြင်း၊ ဖျားနာခြင်း၊ ဝေဒနာခံစားခြင်း၊ ဝမ်းနည်းခြင်း၊ ဒုက္ခပြဿနာများကို အဘယ်ကြောင့်ခရစ်ယာန်တို့ ခံစားကြရသနည်း။ ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါ သသင့်၍လား၊ စိတ်တော်နှင့်မထိတွေ့၍လား၊ ရွေးစရာအခွင့်အရေး မရှိတော့ဘူးလား။ မည်သို့တုန့် ပြန်ရမည်နည်း။
ဘုရားသခင်သည်သူ့သမီးများကို ပညာပေးတတ်ကြောင်း ဤကျမ်းစာကသွန်သင်ပါသည်။ ဆင်းရဲဒုက္ခများသည် ဘုရားသခင်ထံတော်မှ မလာသော်လည်းဘုရားသခင်က ခွင့်ပြုထားသည်။ သို့သော်ဘုရားသခင်ကအသားလွတ်လွှတ်ခြင်း မပြု။ နောက်မှကြိုးကိုင်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ကောင်းစားဖို့ရန်၊ ရင့်ကျက်ဖို့ရန်နှင့် အခြားသောကောင်းကြီးမင်္ဂလာများထပ် ဆောင်းပေးချင်၍ စမ်းသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
ခရစ်ယာန်များအတွက် ရွေးချယ်စရာမရှိပါ။ အခက်အခဲပြဿနာများသည် ကောင်းကြီးမင်္ဂ လာပေါ်ထွန်းစေတတ်၍ စိတ်ပျက်အားငယ်ခြင်းသည်လည်း ဘုရားသခင်စီရင်ခွင့်ပြုရာဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏ပုံရိပ်လွှမ်းမိုး၊ ကူးစက်၊ ထင်ဟပ်စေရန် ဘုရားသခင်ကအလိုတော်ရှိပါသည်။
သို့ကြောင့်ရှေးဦးဟေဗြဲယုံကြည်သူများအား သု ၃:၁၁.၁၂ဖြင့် သတိပေးတိုက်တွန်းထား သည်။ ဘုရားသခင်ကဟေဗြဲတို့အား “ငါ့သားတို့” ဟုခေါ်သည်။ ကိုယ်တော်၏စည်းကမ်းကာလနား များမလိုက်နာလျှင် အပြစ်တင်ခြင်းခံရမည်အကြောင်း သတိပေးထားသည်။ အကယ်၍ခြားနားခြင်း မလိုက်နာခြင်းပြုလျှင် ကိုယ်တော်ဘုရားနှင့်ဆက်ဆံရေး ပြတ်တောက်သွားမည့်အကြောင်း သင်ခန်း စာပေးထားပါသည်။
၁၂:၆ “Chastening” သို့မဟုတ် “Chastiement” ဟူသောပဲ့ပြင်ဆုံးမခြင်း အ ကြောင်းကိုပြောလျှင် ကြိမ်ဒုတ်ကိုသတိရသင့်သည်။ သို့သော်ဤနေရာတွင်မူ သားသမီးများလိမ္မာ ရေးခြားရှိဖို့ဖြစ်သည်။ သွန်သင်ခြင်း၊ စည်းကမ်းချိုးဖောက်ခြင်း၊ အမှားပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် သတိပေး ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းသည် အသက်တာအားတန်ခိုးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် နတ်ဆိုးများ နှင်ထုတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤကျမ်းပိုဒ်ပါ ဆုံးမခြင်းသည် မှားယွင်းသောအမှုအတွက် အပြစ်ပေးခြင်း မဟုတ်ပါ။ စုံစမ်းခြင်းကို ကျော်လွန်သည့်နည်းလမ်း လေ့ကျင့်ပေးခြင်းဖြစ်သည်။
၁၂:၇၊၈ ဘုရားသခင်၏ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်းကို လည်းခံဖို့သွန်သင်ပေးပါသည်။ ကိုယ် တော်၏စည်းကမ်းကာလနားများသည် ကျွန်ုပ်တို့အားပုံသွင်းရန်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ခွေမြီးကောက် ကျည်တော်ကစွပ်သကဲ့သို့ လုပ်နေလျှင် ပုံစံမကျမခြင်းပုံသွင်းမှာသေချာသည်။ ထိုထက်ခက်ခဲသော နည်းလမ်း၊ ကြီးလေးသောပုံစံဖြင့် ဆေးခါးခါးတိုက်ကျွေးနိုင်သည်။ ဘုရားသခင်၏ ကျောင်းတော် တွင်လည်းအတန်းစနစ်ရှိသည်။ သင်ခန်းစာကြေညက်ပြီးမှသာ လျှင်အတန်းတင်ပေးပါသည်။
အသက်တာ၌စမ်းသပ်ခြင်းခံရသည့်အခါ ဘုရားသခင်သည် အကြမ်းပတမ်းမလုပ်ပါ။ သား သမီးငယ်များကဲ့သို့ စမ်းသပ်ပါသည်။ ဖခင်တိုင်းကသားသမီးများကို ကောင်းစေလိုသော ချစ်စိတ်စေ တနာဖြင့်သွန်သင်စမ်းသပ်သကဲ့သို့ ဘုရားသခင်လည်းထိုနည်းအတိုင်းသွန်သင်သည်။ ဘုရားသခင် သည်သူ၏သားသမီးများကို အမှန်တကယ်ကြီးထွားရင့်ကျက်စေလိုပါသည်။
၁၂:၉ များသောအားဖြင့် ဖခင်ထံမှစည်းကမ်းကာလနားသင်ယူရရှိကြပါသည်။ ဖ ခင်ကမုန်းသောကြောင့် ဤသို့စည်းကမ်းချုပ့်ချယ်သည်ဟု အထင်မလွဲရပါ။ ဖခင်များသည် သား သမီးများကို အထူးဂရုစိုက်သူများဖြစ်၍ လေးစားရပေမည်။
ထိုထက်ကြီးမားသော ဝိညာဉ်တော်အဖဘုရားသခင်သည် အဘယ်မျှလောက် လေးစားကြည် ညိုဖွယ်ရာကောင်းပါသနည်း။ အဘဘုရားသခင်သည် ဝေနေယျသတ္တဝါအပေါင်း၏ ဝိညာဉ်ဖခင် ဖြစ်သည်။ လူသည်လည်း ဝိညာဉ်ဖြင့်အသက်ရှင်သူများဖြစ်သည်။ ထိုသို့အားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ပျော် ရွှင်ခြင်းအသက်တာသည် အဘဘုရားသခင်၌သာ တည်မှီရသည်။
၁၂:၁၀ လောကမိဘများ၏စည်းကမ်းကာလနားများသည် ပြည့်စုံသောစည်းကမ်း မဟုတ်ပါ။ ကလေးဘဝ၊ လူငယ်ဘဝအတွက်သာ ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မှာ ထိုစည်းကမ်းများသည် အကောင်းဆုံးဟုထင်မှတ်ကြသည်။ မှန်ကန်၍တရားနည်းလမ်းကျသည်ဟု ယူဆကြသည်။ သို့သော် တစ်ခါတရံမှာ မမှန်ကန်ပါ။
ဘုရားသခင်၏စည်းကမ်းကာလနားများကား အစဉ်သဖြင့်ပြည့်ဝစုံလင်သည်။ ကိုယ်တော်၏ ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ဉာဏ်ပညာပါရှိသောကြောင့် မချို့ယွင်းတတ်ပါ။ ကိုယ်တော်၏ဆုံးမပဲ့ပြင်ခြင်း သည်ကျွန်ုပ်တို့ကောင်းစားဖို့ သက်သက်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အားကိုယ်တော်၏ ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ် ခြင်း၌တည်နေစေလိုသည်။ ဘုရားရှင်၏ဖြောင့်မတ်စင်ကြယ်ခြင်းဖြင့် ဘုရားရှင်ကျောင်းတော်အပြင် ဘက်နှင့်မဆိုင်။
ထိုအကြောင်းကို Jowett ကဤသို့ရှင်းပြထားသည်။
ဘုရားသခင်၏ပဲ့ပင်ဆုံးမခြင်းသည် အပြစ်ဒဏ်ပေးခြင်းမဟုတ်။ ပြုပြင်ဖန်တီးခြင်း ဖြစ်သည်။ ဘုရားရှင်ဆုံးမခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ရာရစေပါသည်။ အချင်းချင်းဝေငှရာဖြစ်၍ လမ်းညွန်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထိုလမ်းညွန်ခြင်းသည် စင်ကြယ်ရာနှင့်လှပသော အသက်တာအတွက် ဖြစ်သည်။ လောင် စာသည်လောင်စာကိုသာ လောင်ကျွမ်းစေသည်မဟုတ်။ အလင်းရောင်ပေးသဖြင့် လူများအတွက် အဖိုးတန်ပစ္စည်းဖြစ်ပေသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင်စည်းကမ်းသည် ထင်းမီးလောင်စာဖြစ်သည်။ ထိုထင်းမီး နှင့်တူသောကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်တို့ဘေးနားတွင် အစဉ်သဖြင့်ရှိလျက် သတိမမူဂူမဖြစ်၊ ပစ်စလက် ခက်ဖရိုဖရဲဖြစ်မှုများကို သိမ်းကျုံးပေးပြီး စနစ်တကျလင်းတောက်စေပါသည်။ ဘုရားသခင်၏ကျေး ဇူးတော်သည်အမှောင်ထဲတွင် အစဉ်ထွန်းလင်းသည်။ ဝိညာဉ်တော်အသီးအပွင့်များ ထုတ်လုပ်ပေး စေပါသည်။ ကိုယ်တော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်သည် အရာခပ်သိမ်းအတွက် နှစ်လိုဖွယ်ရာတည်း။
၁၂:၁၁ စည်းကမ်းကလနားများသည် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်နှင့်တူပေသည်။ သို့သော် လည်း ဆုံးမခြင်းခံရသူများသည် နောက်မှငြိမ်သက်ခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သော ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကျိုးကို ခံစားကြရ၏။ ထိုအကြောင်းကို သတိမထားအမှတ်တမဲ့နေတတ်ကြသည်။ ထို့ကြောင့် Leslie Weatherhead ကဤသို့ဆိုထားသည်။
လူတိုင်းအားနေရောင်ခြည်အောက် ဤကမ္ဘာတွင်နွေးထွေးသော အတွေ့အကြုံကျန်းမာ ပျော် ရွှင်ရာ နှင့်အောင်မြင်မှုရှိနေစေချင်ပါသည်။ သို့သော်လည်း နေရောင်အောက်မှ ထိုနွေးထွေး သောအရာများထက် ဘုရားသခင်၏အလိုတော်နှင့် အမှောင်ရိပ်ထဲမှာ စိုးလန့်သော ဘဝခံစား ကြရသည်။ ထိုအမှောင်ထုအတွက် ဘုရားသခင်အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ထိုအမှောင်ထုက သင်ပေးသောအရာမှ ကြိုးစားရုန်းကန်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုန်းတော်ကြီး Fenelon ကဘုရား သခင်နှင့်သင့်အကြားတွင် သာယာချမ်းမြေ့ခြင်းသည် စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့ သော်နှိမ့်ချခြင်းတော့ရှိရမည်။ ထိုသို့ရှိမှသာလျှင် ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်၍ သင့်အထဲတွင်လည်း ဝိညာဉ်တော်ကိန်းဝပ်စိုးစံသည် ဟုဆိုသည်။
C.H. Spurgeon ၏သက်သေခံချက်လည်းကြည့်ကြရအောင်။
ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ ရရှိထားသောငြိမ်သက်ခြင်း၊ အချိန်နာရီနှင့် ပျော်ရွှင်မှုများကို ခြူးတပြားနှင့် ရောင်းစားမိမှာစိုးရိမ်မိသည်။ ဝမ်းနည်းခြင်း မျက်ရည်နှင့်နာကျင်ခြင်းများ သည်ရေတွက်၍ မကုန်နိုင်အောင်ကောင်းစားရန်အတွက် ဖြစ်သည်။ တူ၊ ပေ၊ မီးနှင့်တံစဉ် များကိုမည်သို့သဘောထားရမည်နည်း။ ထိုပင်ပန်းခြင်းများသည် ကျွန်ုပ်အိမ်အတွက်အ ကောင်းဆုံးသောပရိဘောဂများကို လုပ်ပေးပါသည်။
၁၂:၁၂ ယုံကြည်သူများသည် လောကဓံတရားအောက်တွင် ခေါင်းငုံ့နေဖို့မဟုတ်ပါ။ အားနည်းသောယုံကြည်ချက်များသည် အခြားသူများသို့ရောဂါဆိုးသဖွယ် ကူးစက်နိုင်သည်။ တွဲလွဲ သောလက်များကို အသက်ရှင်တော်မူသော ခရစ်တော်အားအစေခံပါစေ။ ယိုင်နွဲ့ချိနဲ့သော ဒူးခေါင်း များသည်ဘုရားသခင်ရှေ့တွင် ဒူးထောက်ရန်ရိုးတွင်းခြင်ဆီပြည့်ဝပါစေ။
၁၂:၁၃ မစွမ်းသောခြေထောက်များသည်လည်း ခရစ်ယာန်စည်းကမ်းကာလနား ဘောင်ထဲရောက်လျှင် အားအင်ပြည့်ဝ၍ ဖြောင့်တန်းစွာလျှောက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။
ထိုအကြောင်းကို Willian ကဤသို့ရေးထားပါသည်။
ညီအစ်ကိုများ၏ မစွမ်းသောခြေထောက်များသည်လည်း သခင်ဘုရားခင်းထားသော လမ်း ဖြောင့်တွင်မူသက်သာစွာလျှောက် လှမ်းနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ဖြောင့်တန်းစွာမလျှောက်လှမ်း သူများအတွက် လမ်းကြမ်းဖြစ်သဖြင့် ချော်လဲနိုင်ပါသည်။
“ခရီးပမ်းနေသူသည် လမ်းဘေးတွင်မုန်တိုင်းဝင်ခိုနေသည်။ ခြေထောက်များမသယ်နိုင်တော့ ပါ။ ပခုံးနောက်ပစ်လျှင် လက်များကိုတွဲလောင်းချထားသည်။ ဒူးများလည်းတဆတ်ဆတ် တုန်လျက်မြေကြီးပေါ်သို့ ပုံလဲကျမတတ်ဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်တွင် ဘုရားသခင်၏သာဝက ခရီးသည်ရောက်လာသည်။ ထိုသူကသနားကြင်နာစွာဖြင့် ပြုံးပြလျက် အားယူထစမ်းပါ။ ခြေလက်တို့ကိုအားထည့်စမ်းပါ။ ဤမျှတောင်ရောက်နေပြီဘဲ။ အားမလျှော့ပါနှင့်။ စိတ်ခိုင်မာ သူအတွက်လမ်းဆုံးမှာ အိမ်ရှိပါတယ်။ သင့်လမ်းကိုကြည့်စမ်း။ ဖြောင့်ဖြူးသာယာနေတာဘဲ၊ သမားတော်ကြီးကသင့်ခြေလက်များကို ကျန်းမာအားပြည့်စေမှာပါ။ သင့်ရှေ့ကလူများလည်း ဤအခက်အခဲမျိုးကို ကျော်ဖြတ်ပြီး၊ ဘုရားသခင်ထံအရောက်သွားခဲ့တာပဲ။ တခြားသူများ လည်းလှမ်းနေဆဲပါ။ သင်တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ သင့်လိုလူစားအများကြီး၊ လမ်း ဆုံးမှာပန်းတိုင်ရှိတယ်” ဟုဆိုသည်။ ဘုရားသခင်သည် ပင်ပန်းသူအားစကားအားဖြင့်သာ မစသည်မဟုတ်ပါ။ လူတော်၏နှုတ်သတ္တိကိုလည်းပေးသည် (ဟေရှာ၅၀:၄)။ ပျော်ရွှင်ခြင်း သည်တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းခံရသူများ အတွက်ဖြစ်သည်(ဟေဗြဲ ၁၃:၂၂)။ တတိယမြောက် ဝမ်းသာစကားဟူသော ရိုးစင်းစွာယုံကြည်၍ အင်အားရှိသောကြောင့် ဘုရားသခင်၏စည်း ကမ်းအရာတွင်နှိမ့်ချစွာ နေနိုင်ကြောင်းဖြစ်သည်။
၁၂:၁၄ ခရစ်ယာန်များသည် လူတိုင်းနှင့်တချိန်လုံးပလဲနံပသင့်ရသည်။ သို့သော် ဤ ကျမ်းချက်၏အဓိကဆိုလိုချက်မှာ စုံစမ်းနှောင့်ယှက်ခြင်းခံစားရသောအခါ ယုံကြည်ခြင်းပေါ့လျှော့ ပြီးလောကီသားများမဆန်ဖို့ သွန်သင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအချိန်မျိုးတွင် ပြဿနာရှုပ်ထွေးပြီး အနီး ဆုံးလူနှင့် အရင်းနှီးဆုံးလူများနှင့်ပင် ကတောက်ကဆဖြစ်တတ်သည်။
သန့်ရှင်းခြင်းပပါရမီမရှိလျှင် အဘယ်သူမျှထာဝရဘုရားကို မဖူးမြင်ရ။ သန့်ရှင်းခြင်းပါရမီ ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။ ယုံကြည်သူများ၏ သန့်ရှင်းခြင်းပါရမီအကြောင်းကို ဓမ္မသစ်ကျမ်းတွင် သုံးကြိမ်သုံးခါထက် မနည်းရှင်းပြထားပါသည်။
ပထမဆုံးအသက်တာပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းပါရမီ ရရှိပါသည်။ လောကအရာနှင့် ကင်းကွာပြီးဘုရားထံတော်ပါးသို့ ရောက်ရှိသူဖြစ်သည် (၁ကော၁:၆၊ ၆:၁၁)။ ခရစ်တော်နှင့်ပေါင်း ဖက်ရသောကြောင့် ထာဝရစင်ကြယ်သည်။ ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ MartinLutherက “ငါ၏စင် ကြယ်ရာသည်ကောင်းကင်နိုင်ငံဖြစ်သည်”ဟုဆိုထားသည်။ ခရစ်တော်သည် ငါ့တို့၏သန့်ရှင်းခြင်း ပါရမီဖြစ်၍ ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်၌ရပ်စေသော အစွမ်းသတ္တိဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးအချက်မှာ ကွင်းလုံးကျွတ်သို့မဟုတ် ပြီးပြည့်စုံသောစင်ကြယ်မြင့်မြတ်ခြင်း ဖြစ် သည်။ ထိုလမ်းစဉ်သည် ကောင်းကင်လားရာလမ်းဖြစ်သည်။ အပြစ်နှင့်လည်းထာဝရကင်းစင်သည်။ ဇာတိဟောင်းလည်းအခွံကျွတ်ကျလျက် စစ်မှန်ခိုင်မာသောအသက်တာရရှိသွားမည်။
နေ့စဉ်အသက်တာတွင် စင်ကြယ်ခြင်းရှိရမည့်အကြောင်း စောစောကရှင်းပြခဲ့ပြီးပါပြီ။ ထိုသို့ သန့်စင်ပြီးမှအတိတ်ဟောင်းသို့ ပြန်သွားချင်ကြမည်မဟုတ်ပါ။ အကယ်၍အသက်တာပြောင်းလဲပြီ ဆိုလျှင်အကျင့်သီလသညည် အထွေအထူးကျင့်ကြံစရာမလိုတော့သော နိစ္စဓူဝအကျင့်မျှသာဖြစ် သည်။ မျက်နှာတော်အား ဖူးမျှော်ရာတွင်ရွှင်ပြလန်းဆန်းလျက် ကျက်သရေမင်္ဂလာရှိမည်။ သို့သော် လက်တွေ့စင်ကြယ်သန့်စင်ဖို့ရန် နာခံခြင်းနှင့် စုပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းရှိမှသာတိုးတက်နိုင်သည်။ ရိုးသားစင်ကြယ်သောသီလကိုအချိန်နှင့်အမျှ နှိုးဆွပြုစုရသည်။ (ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်အသက်တာသည် ထိုသို့ပြုကျင့်ရန်အခက်အခဲ ရှိကြောင်းကို ၂:၁၁တွင်ရေးပြထားသည်) ထိုကိစ္စနှင့်ပတ်သက၍ Wuest ကဤသို့ဆိုထားသည်။
တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ချက်ဆိုသည်မှာ ဗိမာန်တော်ကိုစွန့်ခွာပြီး အသက်တာပြောင်းလဲသော ယု ဒလူမျိုးများ၊ ယုံကြည်ခြင်းအသစ်တွင် ခိုင်မာလာစေရန်၊ ဗိမာန်တော်ထဲတွင် ကြွင်းကျန်နေ သည့်ယုဒများအား သမ္မာတရားသစ်၌ ယုံကြည်ခြင်းရှိစေရန်၊ လေဝိရိုးရာထုံးတမ်းစဉ်လာ တွင်အိပ်မက်မက်နေသေးသူများအား အမြင့်ဆုံးယဇ်ပုရောဟိတ်မေရှိယသခင်အား ယုံကြည် လက်ခံလာစေရန်စသည့် အဓိကတိုက်တွန်းရန်လိုအပ်ချက်များ ဖြစ်သည်။ ထိုအမှန်တကယ် ပြောင်းလဲသသွားသော ယုဒလူမျိုးများက မပြောင်းလဲသေးသော ယုဒများအားခရစ်ယာန် အသက်တာပြသ၍ တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်သည်။
သို့သော်လွယ်ကူသည်တော့မဟုတ်။ သခင်ဘုရားမပါရှိလျှင် လက်တွေ့ဘဝတွင်စင်ကြယ် ခြင်းမရှိနိုင်ပါ။ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်သော အသက်တာရှိမှသာလျှင် ဘုရားသခင်မျက်နှာတော် ဖူးမျှော် ရသည်ဟုဆိုလိုခြင်းမဟုတ်။ ယေရှုခရစ်တော်တပါးတည်းသာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့၏ကောင်းကင် ဝင် ရောက်ခွင့်လက်မှတ်ဖြစ်သည်။ အဓိကအာဘော်မှာလက်တွေ့စင်ကြယ်ခြင်းဖြင့် ဘဝသစ်ထူထောင်ရ မည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍အကြင်ယုံကြည်မှု၏ စင်ကြယ်ခြင်းအသက်တာသည် တိုးတက် မှုမရှိလျှင် အမှန်တကယ်မပြောင်းလဲသေးပါ။
သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်စိုးစံလျှင် အသက်တာသည်လောကသားများ၏ အကျင့်နှင့်မတူ တော့ပါ။ သီးသန့်စင်ကြယ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်ကိုလက်ခံရရှိလျှင် အသက်စမ်း ရေသည်တသွင်သွင် စီးဆင်းနေသည်။
၁၂:၁၅ နောက်ကျမ်းပိုဒ်နှစ်ခုသည် အပြစ်နှင့်ရှောင်ဝေးရမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ အဓိကသတိပေးခြင်းမှာယုံမှားသံသယ ကင်းရှင်းရေးဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်အခြားမှား (၄)မျိုးကို သတိပေးထားသည်။
အပြစ်တကာအပြစ်ထဲတွင် အကြီးမားဆုံးအပြစ်သည် မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူဝါဒဖြစ်၍ ဘုရားသခင် ၏ကျေးဇူးတော်ဆုံးရှုံးသည်။ ခရစ်ယာန်နှင့်တူလျက်၊ ခရစ်ယာန်ကဲ့သို့ပြောဆိုလျက် ခရစ်ယာန်အတု အယောင်လုပ်စားသူများသည် ဘယ်သောအခါမှအသက်တာမပြောင်းလဲသူများဖြစ်သည်။ ခရစ်တော် အနားသို့ရောက်ရှိလာသော်လည်း ကယ်တင်ခြင်းမရလိုက်သောကြောင့် နီးလျက်နှင့်ဝေး နေကြသူ များဖြစ်သည်။
မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းသည် ခါးစွာသောပင်မြစ်ပေါက်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်ခရစ်တော်၌ ယုံကြည်ခြင်းကိုပစ်ပယ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအပြစ်သည် ကူးစက်တတ်သောရောဂါဆိုးလည်းဖြစ် သည်။ အခြားအပြစ်အနာများမှာမူ ထိုအပြစ်၏ဆင်ခြေဆင်လက်သံသယနှင့် ငြင်းပယ်ခြင်းများ ဖြစ်သည်။
၁၂:၁၆ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းသည် စိတ်ဓာတ်ပျက်ပြားခြင်းနှင့် ဆက်နွယ်သည်။ခ ရစ်ယာန်အတုအယောင်သည် စိတ်ဓာတ်ပျက်စီးခြင်းနွံတွင် မှောက်ရက်လဲသူများဖြစ်သည်။ မိမိအ ပြစ်ကိုမမြင်ဘဲ၊ မြည်တွန်တောက်တီးလျက်၊ ဘုရားသခင်ကိုသာတချိန်လုံးအပြစ်တင်တတ်သည်။ မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းနှင့် ကာမတဏှာအပြစ် ဆက်စပ်ပုံကို ၂ပေ ၂:၁၀၊ ၁၄၊ ၁၈နှင့်ယုဒ၈၊ ၁၆၊ ၁၈တို့ တွင်ရှင်းပြထားပါသည်။
နောက်ဆုံးတွင် ဧသော ကဲ့သို့ဘာသာရေးမဲ့သူများဖြစ်သည်။ ဧသောမှာမွေးရာပါအခွင့်အရေး လက်လွတ်ဆုံးရှုံသည်။ တနပ်စာဘိုးမျှနှင့် ဘုရားပေး​သော ဂုဏ်သိက္ခာကို အပေးအယူလုပ်သည်။
၁၂:၁၇ ဧသောသည် လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့သည်။ ဘုရားကောင်းကြီးမင်္ဂလာသားဦးအ ရာကိုပြန်လည်တမ်းတတန်ဖိုးထားသော်လည်း အချိန်နောက်ကျသွားပြီ။ မွေးသဖခင်ထံတွင်လည်း ထပ်ပေးစရာကောင်းကြီးမင်္ဂလာ မကျန်ရှိတော့ပါ။
ထိုအမှုသည်လည်း မိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအယူမှားခြင်းဖြစ်သည်။ ဝိညာဉ်ရေးရာတန်ဘိုးကိုအလေးမထား။ ခရစ်တော်၏လာရောက်ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ ဝေဒနာခံစားခြင်းကို ပစ်ပယ်ခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ဆုံးရှုံးလက် လွှတ်ခဲ့ရသောအခွင့်အရေးမျိုး နောက်တစ်ခါမရနိုင်။ အခွင့်အရေးသည်နှစ်ခါလာလေ့မရှိပါ။ နောင်တ မျက်ရည်ကျချင်ကျမည်။ သို့သော်မိကျောင်းမျက်ရည်သည် ဘုရားသခင်စိတ်တော်နှင့် ထိတွေ့သော နောင်တမဟုတ်။
၁၂:၁၈ ပညတ်တော် နောက်သို့ပြန်သွားသူများသည် ဝိညာဉ်တော်ပဋိညာဉ်နှင့် ကြောက်လန့်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ဝေးကွာကြောင်းဆင်ခြင်သင့်သည်။ သိနာတောင်ပေါ်မှာ ပေးခဲ့သောပဋိညာဉ်များသည် ကောက်ရိုးမီးသာဖြစ်သည်။ ယခုတွင်မူအရာရာကိုမမြင်နိုင်အောင် အဝတ်ခြုံအုပ်ထားသော အမှောင်ထဲသို့ရောက်သွားခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။ ပတ်ဝန်းကျင်တွင်လေမုန် တိုင်းမြည်ဟိန်းနေခြင်းမျိုးဖြစ်သည်။
၁၂:၁၉ ထပ်ပြောရလျှင်ထိုပတ်ဝန်းကျင်သည် ဖရိုဖရဲကျီးလန့်စာ စားလျက်စိုးရွံ့ ကြောက်ခမန်းလိလိဖြစ်သည်။ တံပိုးမှုတ်သံမကြားရဘဲ၊ မိုးကြိုးသံကိုသာကြားရသဖြင့် ရပ်စဲဖို့သင့် သည်။
၁၂:၂၀ “တိရစ္ဆာန်သော်၎င်း၊ ထိုတောင်ကိုထိမိလျှင် ကျောက်ခဲနှင့်ပစ်၍သေစေ” ဟုဆိုထားပါသည်။ နားလေးသူနှင့်အဟိံတိရစ္ဆာန်များကိုပင် ခွင့်မလွှတ်ဘဲသေဒဏ်သတ်မှတ်လျှင် ထိုကျမ်းပိုဒ်၏သတိပေးချက်သည် ကြီးမားပါသည်။
၁၂:၂၁ ထိုမျှလောက်ကြီးလေးသောကြောင့်မောရှေကိုယ်တိုင်က “ငါသည်ကြောက်ရွံ့ တုန်လှုပ်ခြင်းရှိ၏“ဟုဆိုခဲ့သည်။ ဤစကားများသည် သဘာဝတရားနှင့်ပညတ်တော်အမှုကို ဖော် ကျူးခြင်းဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်၏အမျက်ဒေါသမသင့်စေရန် လေးလေးနက်နက်သတိပေးသည်။ ပညတ်တော်၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ကယ်တင်ခြင်းတရားသိရှိဖို့မဟုတ်ဘဲ အပြစ်၏နောက်ဆက်တွဲရ လာဒ်ကိုအသိပေးပါသည်။ အပြစ်ကဘုရားနှင့် လူခြားနားပုံကိုပြောပြသည်။
၁၂:၂၂ ယုံကြည်သူများသည် သိနာတောင်ပေါ်မှ စိုးလန့်ဖွယ်ရာများနှင့် မသက်ဆိုင် ပါ။ ဘုရားသခင်၏ကျေးဇူးတော်နှင့် သာပတ်သက်ပါသည်။
အမြင့်ဆုံးသောပလ္လင်တော်မှ သိုးသငယ် စိုးစံ
အနှောင့်အယှက် ပယောဂဟူသမျှ မြင်ကွင်းမှ ပျောက်စေပြီ။
“ကျွန်ုပ်တို့သည် ထာဝရစိုးစံမည့်နေရာသို့ သွားရာလမ်းပေါ်မှာ ရောက်ရှိနေပါပြီ။ အနာဂတ် သည်ကျွန်ုပ်တို့လက်ထဲမှာ ရှိနေသည်။ မနက်ဖြန်ကိုပိုင်ဆိုင်ရပြီ။ ဤကမ္ဘာပေါ်မှာ နေရလျက်ကောင်း ကင်နိုင်ငံကို ပိုင်သနေပါပြီ။
လက်ဖြင့်တို့ထိနိုင်သောတောင်သို့ သွားစရာမလို။ ကောင်းကင်နိုင်ငံ၏သန့်ရှင်းရာ ကျက်သ ရေဆောင်သို့ဝင်ခွင့်ရကြပြီ။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် အထံတော်ပါးသို့တိုးဝင်ချဉ်းကပ်၍ အပြစ်ဝန်ချ ပြီးချီးမွမ်းကိုးကွယ်ဆုတောင်းသူများ မဟုတ်တော့ပါ။ အသန့်ရှင်းဆုံးနေရာသို့ အချိန်တိုင်း၊ နာရီ တိုင်းတိုးဝင်ချဉ်းကပ်နိုင်သည်။ ဘုရားသခင်က ဘယ်သောအခါမှ “ဝေးလေကောင်းလေ” ဟုမပြော ပါ။ “ငါနားသို့ရင်းနှီးစွာဝင်လာပါ” ဟုသာဖိတ်ခေါ်လျက်ရှိသည်။
သိနာတောင်ပေါသည် ပညတ်ချက်ပေးရာအရပ်ဖြစ်၍ ယုံကြည်ခြင်းသည် ထိုသိနာတော်ပေါ် မှာသန္ဓေတည်ပါသည်။ ထိုကောင်းကင်နိုင်ငံ၏ နိမိတ်ပုံရိပ်တောင်တော်သည် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံ ရာမြစ်ဖျားချောင်းဖျားဖြစ်သည်။ ယေရှုခရစ်တော်၏ ကယ်တင်ခြင်းမျိုးစေ့တည်ရာလည်းဖြစ်သည်။
ပညတ်တော်တွင် ယေရှုရှလင်မြို့တော်ရှိသကဲ့သို့ ယုံကြည်ခြင်းတွင် ကောင်းကင်ရွှေမြို့တော် ရှိသည်။ ထိုရွှေမြို့တော်သည် အသက်ရှင်တော်မူသော အဘဘုရားသခင်စိုးစံရာဖြစ်သည်။ ထိုမြို့ တော်တည်ဆောက်သည့် ဗိသုကာပညာရှင်သည်လည်း အဘဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးသို့ ဝင်ရောက်သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့သည် နန်းဝတ်သုံးဆောင်ခွင့်ရ တော်ဝင်မိသားစုဖြစ်ရသည်။ ကောင်းကင်တမန်များပင်လျှင် မသီဆိုနိုင်သောသီချင်းဖြင့် ဂုဏ်တော် ချီးမွမ်းကြရမည်။ အဘယ်ကြောင့်ကောင်းကင်သားများက မသိကြသနည်းဆိုသော ကျွန်ုပ်တို့၏ ကယ်တင်ခြင်းအရသာကို မခံစားတတ်ကြသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
၁၂:၂၃ ကောင်းကင်စာရင်း၌ဝင်သောသားဦးတို့၏ အသင်းတော်၌စည်းဝေးကြရ မည်။ ထိုအရာသည်အသင်းတော်၌ပါဝင်ခြင်း၊ ခရစ်တော်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်သတို့သမီး၊ ပင်တေကုတ္တေ နေ့မှစ၍နာမတော်မြတ်၌ သေလွန်သူများအားလုံး ဘုရားသခင်ရှေ့တော်မှောက်၌အတူတကွ ထာဝရ ပျော်ရွှင်ရမည်။ သင်္ချိုင်းဂူထဲတွင်သေလွန်ရောက်ရှိသူများ ထမြောက်၍သူတို့ဝိညာဉ်နှင့် ပြန်လည်ပူး ပေါင်းမည့်မျှော်လင့်ရာနေ့မြတ်မင်္ဂလာ ဖြစ်သည်။
အရာခပ်သိမ်းတို့ကိုတရားစီရင်တော်မူသော ဘုရားသခင်ကိုယုံကြည်ခြင်းဖြင့် မြင်ကြရမည်။ အမှောင်အရိပ်များကိုလည်း မတွေ့ရတော့ပါ။ ယုံကြည်ခြင်း၊ ရူပါရုံဖြင့်ဘုရားရှင်တော်၏ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများကိုမြင်နိုင်သည်။
ရှေးဟောင်းသန့်ရှင်းသူများသည်လည်း ထိုနေရာမှာလာရောက်ပြည့်စုံကြမည်။ သူတို့ဝိညာဉ် များသည်လည်းပြည့်စုံခြင်း ရောက်ကြမည်။ ယုံကြည်ခြင်းအားဖြင့် သန့်ရှင်းခြင်းရသောကြောင့် မှဲ့ တစ်ပေါက်မစွန်း၊ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခွင့်ရကြပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်တော်၏အမှု တော်တန်ခိုးသည် ထိုသူများအပေါ်တွင် သက်ရောက်သောကြောင့်တည်း။ ကာလကြာရှည်စောင့်မျှော် နေရသူများဖြစ်ကြ၍ ခန္ဓာကိုယ်များသည်လည်းကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရမည့် အကြောင်းရှိသည်။
၁၂:၂၄ ယေရှုသခင်သည် ပဋိညာဉ်တရားသစ်အောင်သွယ်တော် အဖြစ်ထိုနေရာတွင် ရှိနေပါသည်။ ထိုနေရာတွင်ယေရှုသခင်ရှိနေခြင်းသည် ပဋိညာဉ်ဟောင်းအောင်သွယ်တော် မောရှေ နှင့်ပဋိညာဉ်တရားသစ် အောင်သွယ်ခရစ်တော်၏ခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ မောရှေသည်ဘုရားသခင် ထံတော်ပါးမှပဋိညာဉ်များကို လက်ခံရယူပေးသော အောင်သွယ်ဖြစ်၍သူ့လူမျိုး ဣသရေလအမျိုး အားကယ်နှုတ်သူဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်နှင့်လူများအကြားတွင် ရှိနေလျက်ပဋိညာဉ်အတိုင်းသူ့လူ မျိုးအားသန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေဖို့ရာ စီစဉ်ဆက်သွယ်ပေးသူဖြစ်သည်။
ခရစ်တော်သည်မြင့်မားသော ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ အောင်သွယ်တော်ဖြစ်သည်။ ဘုရားသ ခင်၏ရှေ့တော်မှောက်တွင် လူသားများစင်ကြယ်ခြင်းရှိစေကြရန် ပဋိညာဉ်အတိုင်းခရစ်တော်အသေ ခံသည်။ အသွေးတော်အားဖြင့် တံဆိပ်ခတ်နှိပ်ခဲ့ပြီး၊ လူသားများအတွက် သူ့ကိုယ်သူရွေးနှုတ်သူအခ အဖြစ်ပေးဆပ်ခဲ့သည် (၁တိ ၂:၆)။
ပဋိညာဉ်တရားသစ်ကို ကိုယ်တော်တိုင်အသေခံခြင်းအားဖြင့် ကောင်းကြီးမင်္ဂလာဆွတ်ဖျန်းခဲ့ သည်။ ကိုယ်တော်၏ဆုံးစမရှိသောအသက်ဖြင့် ဤကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို အာမခံသည်၊ သူ့လူ များအားလက်ျာတော်၌ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကြွယ်ဝစွာ ခံစားနိုင်ကြစေရန်အမှုတော်ဖြင့်ထိန်းကျောင်း ပေးသည်။ ထိုအရာအားလုံးသည် ခရစ်တော်၏သင့်မြတ်ခြင်း အမှုတော်ဖြစ်သည်။
ကရာနီကုန်းတော် ဒဏ်ရာဒဏ်ချက်များက ခရစ်တော်အားဘုရားသခင်၏လက်ျာတော်တွင် ကယ်တင်ရှင်နှင့် အိမ်ရှေ့မင်းသားဖြစ်ကြောင်း သက်သေခံအထောက်အထားပြပါသည်။
အသေခံခြင်းကို ရွေးချယ်သော သိုးသငယ်အား၊
James G Deck.
နောက်ဆုံးတွင် ပဋိညာဉ်တရားသစ်၏ အာမခံတည်းဟူသော ယေရှုထံတော်သို့၎င်း၊ အာဗေလ အသွေးပြောဆိုသော အရာထက်သာ၍မြတ်သောအရာကို ပြောဆိုသော ဖြန်းဆွတ်ခြင်း၏အသွေးထံ သို့၎င်းရောက်ကြ၏။ ခရစ်တော်ဘုရားပြန်လည်ကြွမြန်းသွား သောအခါကားတိုင်ပေါ်တွင်သွန်း လောင်းခဲ့သောအသွေးတော်၏ တန်ဘိုးကိုအဖဘုရားသခင်လက်တော်ထံသို့ ပြန်လည်ဆက်သသည်။ သို့သော်အသွေးတော်ကို ယူဆောင်သွားခြင်းမဟုတ်။ အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောသန့်ရှင်းသော စင်ကြယ်ခြင်းကို ယူဆောင်သွားခြင်းဖြစ်သည်။ ထိုအကြောင်းနှင့်ပတ်သက်၍ J.G. Dects ကဤသို့ ဖွဲ့ဆိုထားပြန်သည်။
ကိုယ်တော်၏အသွေးတော်သည် အာဗေလ၏သွေးထက် ထူးခြားလေးနက်သည်။ ကာဣနာ ကြောင့်အာဗေလအသွေးသွန်းလောင်းခြင်း ဖြစ်သည်။ ခရစ်တော်၏အသွေးတော်သည် ကျေးဇူးတော် အားဖြင့်သွန်းလောင်းခြင်းဖြစ်သည်။ အာဗေလ၏အသွေးသည် “ယာယီဖုံးအုပ်ခြင်း” ဖြစ်၍ ခရစ် တော်၏အသွေးတော်သည် “ထာဝရကာလအုပ်စိုးသည်” အာဗေလ၏အသွေးက “ကလဲ့စားချေမည်” ဟုနာကြင်စွာအော်ဟစ်နေချိန်တွင် ခရစ်တော်၏အသွေးတော်ကမူ “သူတို့လုပ်ရပ်မသိကြသော ကြောင့်လုပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ခွင့်လွှတ်တော်မူပါ” ဟုကြွေးကြော်သည်။
၁၂:၂၅ ဤအခန်းကိုနိဂုံးပိုင်းတွင် သိနာတောင်ပေါ်တွင် ဖွင့်ဟချက်နှင့် ခရစ်တော် ၏ဖွင့်ဟချက်ခြားနားပုံကို ရှင်းပြထားသည်။ ခရစ်ယာန်များ၏ယုံကြည်ခြင်းကို အပေါ်ယံကြောမျှ သာမနှိုင်းယှဉ်ရပါ။ ဘုရားသခင်ကဖိတ်ခေါ်နေပါသည်။ ပိုးပန်းနေပါသည်။ စကားပြောနေပါသည်။ ကိုယ်တော်ကို ငြင်းပယ်လျှင်ပျက်စီးခြင်းရောက်မည်။
ဘုရားရှင်တော်၏ အသံတော်ကိုမကြားချင်ယောင်ဆောင်၍ စိတ်နှလုံးမသွင်းနိုင်သူများသည် ပဋိညာဉ်တရားအရ အပြစ်ဒဏ်ထိုက်သည်။ အခွင့်အရေးကြီးမားလေလေ တာဝန်တ္တရားလည်း ကြီးမားလေလေဖြစ်သည်။ ဘုရားသခင်သည် ခရစ်တော်အားဖြင့် အကောင်းဆုံးနှင့်နောက်ပိတ်ဆုံး ဗျာဒိတ်တော်ကိုဖွင့်ဟပါသည်။ ကောင်းကင်စကားတော်ကို မနာခံခြင်းသည် ပညတ်တော်များကို ချိုးဖောက်ခြင်းထက်ပိုမို အပြစ်ကြီးလေးပါသည်။ လွတ်မြောက်ရာနည်းလမ်းမရှိပါ။
၁၂:၂၆ သိနာတော်ပေါ်မျာ အသံတော်သည်မြေငလျင် အလားတုန်လှုပ်ခဲ့ပါသည်။ သို့ သော်အနာဂတ်အကြောင်းအမိန့် တော်ရှိသောအခါ “မိုးကောင်းကင်ငလျင်” အလားတုန်လှုပ်ရပါ သည်။ ထိုအကြောင်းကို ပရောဖက်ဟဂ္ဂဲကဟောထားပါသည်။ “ကောင်းကင်ဗိုလ်ခြေအရှင်၊ ထာဝရ ဘုရားအမိန့်တော်မူသည်ကား၊ ကာလမကြာမီ၊ ကောင်းကင်မြေကြီး၊ ပင်လယ်၊ ကုန်းတို့ကိုတဖန်ငါ လှုပ်ဦးမည်” (ဟဂ္ဂဲ ၂:၆)။ တဖန် “လူမျိုးအပေါင်းကိုလည်း ငါလှုပ်ဦးမည်” ဟုဟောထားပါသည်။
ထိုငလျင်သည် ချီဆောင်ခြင်းနှင့် ခရစ်တော်၏နိုင်ငံတော် တည်ထောင်ခြင်းအကြားတွင် ဖြစ် လာမည်။ ခရစ်တော်သခင်ကြွရောက်လာသောအခါ လောကကမ္ဘာကြီးသာမက အထက်အာကာသ မိုးကောင်းကင်တိုင်အောင် လှုပ်ခါသွားမည်။ ဂြိုလ်နက္ခတ်တာရာများသည်လည်း ကစဉ့်ကလျား ယောက်ယက်ခတ်လျက် ပင်လယ်သမုဒ္ဒရာရေပြင်သည်လည်း လှိုင်းတံပိုးကြီးထန် ဟိန်းဟောက် အော်ဟစ်ကြမည်။ ခရစ်တော်၏အနှစ်တစ်ထောင် အုပ်စိုးခြင်းနှင့်နီးလာလျှင် ကောင်းကင်မြေကြီး နက္ခတ်တရာဂြိုလ်ကမ္ဘာနှင့် အာကာသဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးသည် အပူရှိန်ဖြင့်တောက်လောင်နေမည် (၂ပေ ၃:၁၀.၁၂)။
၁၂:၂၇ ဘုရားသခင်၏ “တဖန်” ဟူသောစကားမှာ ကောင်းကင်နှင့်မြေကြီးနောက် တစ်ကြိမ်ရွေ့ဦးမည်ဟု အနက်ရသည်။ ဒဏ္ဍရီပုံပြင်ဆန်ဆန် မမျှော်မြင်နိုင်သော အရာများလက်တွေ့ ပေါ်လာမည့်အကြောင်းဖြစ်သည်။ ထိုသို့ရွေ့လျားတုန်လှုပ်ခြင်း၊ ပြီးဆုံးသောအခါမှသာလျှင် အရာခပ် သိမ်းသည်အတည်အကျဖြစ်မည်။
၁၂:၂၈ မျက်စိဖြင့်မြင်ပြီး လက်ဖြင့်တို့ထိနိုင်သောအရာပေါ်တွင် သာယုံကြည်ခြင်းရှိ ကြသည့်ယုဒတို့လည်းတုန်လှုပ်သွားမည်။ တကယ်ယုံကြည်သူများသည် မတုန်မလှုပ်မရွေ့လျားနိုင် သောနိုင်ငံတော်တွင်တည်ရှိကြလိမ့်မည်။ ထိုအကြောင်းကိုနှလုံးသွင်း၍ ဝတ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်း၊ ထုံးနှ လုံးမူကြပါစို့။ ခန့်ညားကြောက်ရွံ့သောသဘောနှင့် လျှောက်ပတ်စွာဝတ်ပြုကြပါစို့။
၁၂:၂၉ နာခံခြင်းမရှိဘဲ၊ ငြင်းပယ်သူများအားဘုရားသခင်က လောင်သောမီး ဖြစ်စေ တော်မူ၏။ သို့သော်ဘုရားရှင်တော်၏ တရားမျှတမှုဖြင့်စင်ကြယ်မှုသည် ကြီးမြတ်တော်မူသ ဖြင့်ရိုသေကိုင်းညွတ်ခြင်းနှင့် လေးစားကြည်ညိုခြင်းခံရပါမည်။
Previous Articleဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၃
Next Articleဟေဗြဲသြဝါဒစာ ၁၁